Indlela yokukhangela amacebo angabathengisi ama-Amazon angcono kakhulu?
Wonke umntu othengisa kuloo ndawo yemakethe ephakamileyo kufuneka azi indlela yokukhangela ama-Amazon aphezulu kwimveliso yerhwebo, izicwangciso, kunye nokubeka esweni intengo kunye nokugcina ezinye izicwangciso ze-smart with a proven use over there. Kodwa indlela yokufumana amathuba afanelekileyo kwaye uqaphele iindlela ezilungileyo zokhuphiswano lwakho ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi kunye nomzamo? Njengoko sele sele kuninzi kakhulu ukwenzela wena kunye nezinto ezininzi ukwenzela ukuba ulungiselele uluhlu lwemveliso yakho kunye nesicwangciso soxabiso. Ngenhlanhla, akukho zixhobo zokunqongophala kwezixhobo ze-intanethi kunye nesofthiwe yokukhangela i-Amazon eyona nto ifunyenwe ngumthengisi-ukususela kwimveliso ye-sourcing, umgaqo-nkqubo wexabiso, imiqathango yokuthumela, ukufumana ingxelo yomthengi, uphando lwegama elingundoqo, kunye neendlela ezilungileyo zokukhushulwa kwemveliso ezilungiswe abathengisi be-ecommerce abaphumeleleyo. Njengoko ndathi, kukho iindidi ezininzi zabancedisi abahlukeneyo kwi-intanethi abakhona ukufikelela okuvulelekileyo. Kodwa ngaphantsi ndiza kukubonisa nje ezintathu zezixhobo zam ezifanelekileyo. Ndizisebenzise ezi zikhetho ezilandelayo ukukhangela amathuba okuthengisa ama-Amazon - iJungle Scout, i-AMZ Tracker, kunye neNgcambu - nganye yazo ifumaneke kakuhle, ngoko masibe nemboniso ofutshane apha ngezantsi.
Isixhobo sokuqala se-intanethi ukukhangela izixazululo zithengisi ze-Amazon yiJungle Scout. Ndiyincoma ukuba uzame phambi kwayo nayiphi na enye into ukuba iqonde ngokukhawuleza ukuba yiyiphi imveliso efunwa kakhulu kwi-Amazon, kwaye yiyiphi into ekhoyo ngoku eyaziwayo kubathengisi ngaphaya kwalo. Enyanisweni, i-Jungle Scout ibonwa ngabathengisi abaninzi abaphumeleleyo kwi-Amazon njengesixhobo esingcono "sokuqhutywa kwedatha" yophando lwemveliso. Eli khetho lithetha ngokwalo, okwenza ukuba ufanele usebenzise okanye ubuncinane ukuba uzame okokuqala. Nazi ezinye izibonelelo ezisisiseko eziza kwesi sixhobo se-intanethi: i-database ebanzi yemetrikhi ecacileyo ebanzi (bobabini, kunye nabakhuphiswano bakho), inceda ekufumaneni amathuba afihliweyo kunye nemigudu engenayo imincinci yokuncintisana, i-niche hunter ukukunika inzuzo phantsi kokuncintisana okwenene, kunye neempawu ezahlukeneyo ezifunekayo ukuze zifikelele ngempumelelo kwimarike entsha.
Esi sixhobo sibonisa amacala aso anamandla xa ufuna ukucinga amagama angundoqo athengisa ama-Amazon, asetyenziselwa ukuhlonywa kwemveliso ephumelele kakhulu. Ngethuba elifanayo, eli sixhobo lokuphenya ngegama eliphambili linokukunceda ngolwazi oluxabisekileyo malunga nemigangatho yokukhangela yangempela kunye nezicelo zegama elingundoqo lemisila elide elisetyenziswe ngabathengi abakhutheleyo kwi-Amazon rhoqo. Ukongeza, i-AMZ tracker inokwakha isakhiwo se-SEO ukubonisa ukuba yintoni enokuyenza ngokucwangcisa uluhlu lwemveliso yeziphumo eziphezulu.
Njengawe-toolword yangaphambili, i-Scope idibanisa uphando lwegama elingundoqo kunye nohlalutyo lwemveliso yokhuphiswano. Phakathi kweminye impawu, lo mncedisi we-intanethi ukhulu kakhulu xa kuziwa kuphuhliso lwamaphulo e-PPC, ukufuna amathuba amatsha amatsha, kunye nokulawulwa komngcipheko ojongene nawo onke ama-estimates data efunekayo ukuze ubone umfanekiso omkhulu weendleko zakho zokuthengisa kunye neendleko ze-FBA . Ndincoma ukusebenzisa le sixhobo ukudibanisa kunye nokufunyaniswa kwezona ziphumo zentengiso yakho-ukuguqula isicwangciso sakho sokuthengisa esisebenza ngokwenene.